Haweeney Somali sheegatay inay ka tirsan tahay Ciiddanka Taraafikada ee dalka Qatar oo la xukumay.
Maxkamadda Dembiyadda ee ku taalla caasimadda dalka Qatar ee Dooxa ayaa la soo taagay Haweeney Somali ah, taasi oo la sheegay inay Lacag ka qaadatay Taksiile, iyadoo sheegatay inay tahay Sarkaal ka tirsan Ciiddanka Ilaalinta Waddooyinka ee Taraafikada.
Jaraa’idka Ara’yi iyo Gulf News ee ka soo baxa Dooxa ayaa maanta qoray Dhacdadan, iyadoo Haweeneyda Soomaalida lagu xukumay Xabsi Hal sanno ah iyo in loo soo masaafurin doono Somalia marka ay dhamaysato Xukunkeeda.
Haweeneydaasi oo aan Saxaafadda loo soo bandhigin magaceeda iyo da’deeda ayaa lagu helay inay Taksiile ku joojisay Deegaanka Al-sacad ee magaalladda Dooxa, iyadoo Dareewalka moodayey inay doonayso in horey loo sii qaado.
Haweeneyda marki iay Taksiga raacday ayey Dareewalkii isugu sheegtay inay Sarkaal Bolis oo ka shaqeeya Waaxda Taraafikadda ee Madiinat Khalifa Traffic department.
Waxay Dareewalkii ka codsatay inuu tusiyo Waraaqihiisa Aqoonsiga iyo Laysinka iyo Diiwaan-gelinta Gaariga, balse waxa uu tusiyey Kaarkiisa Aqoonsiga, wuxuuna u sheegay in Dukumentiyada kale ay yaallaan Xafiiska Shirkadda Taksiga.
Dhacdadan oo aan ka soo xiganay Jaraa’idka Ara’yi iyo Gulf News waxaa lagu sheegay inay Haweeneyda ka codsatay Taksiilaha inuu toos u abaaro Waaxda Taraafikadda ee Al-rayaam, waxayna markii ay halkaasi tageen ka codsatay lacag dhan 6,000 oo Riyaalka Qatar, wuxuuse u sheegay inuu haysanin Kharajkaasi badan.
Waxay ka qaadatay Lacagtii uu hayey oo dhamayd 400 Riyaalka Qatar, kadibna waxay ka codsatay inuu u kaxeeyo Deegaan kale.
Boliska ayuu Dareewalkii ku wargeliyey arrintaasi, waxaana muddo kooban kadib lagu guuleystay in la soo qabto Haweeneydii Soomaalida, taasi oo qiratay Dembiga lagu soo oogay, oo ay ku muteysatay Xabsi Hal sanno iyo in loo soo tarxiilo Somalia.